मुद्दा हाल्न पुष्पा अदालत जादै ! मेरो बच्चा फिर्ता चाहियो भन्दै रोईन (भिडियोसहित)
August 6, 2020 2171
‘बच्चा भेटिएको सबै नाट’क रहेछ, भाग्य न्यौ’पाने पुगेर गरे पर्दाफास’ यो शी’र्षकको भिडि’यो बुध’बार बिहान युट्यु’बको नेपाल ट्रेन्डिङ’मा रह्यो
१९ लाख सब्स्क्रा’इबर रहेको ‘तातात्तो खबर’ नामक युट्युब च्यानल’बाट यो भिडियो मंगलबार बिहान पोष्ट भएलगत्तै फेसबुकमा समेत भाइरल भएको थियो । टाइटल’बाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ, भिडियो’को विषय’वस्तु ।
भिडियो बनाउने युट्युब’रको नाम टाइट’लमै देख्दा धेरैलाई आश्चर्य नलाग्ला, किनकि यो शैली नेपालमा नयाँ होइन । पत्रकारिता बुझेका तर नेपाली युट्युबकारिता’लाई नबुझेका’हरुलाई भने यो शैली पचा’उन गा’ह्रो हुन सक्छ ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै
टाइटलले दुईवटा कुरा बोलेको छ । प्रहरी’ले निस्कर्ष निकालिनसकेको वा निकाल्न नसकेको कुरालाई टा’इटलमै ठोकुवा गरिएको छ । र, त्यसको आफूले ‘पर्दाफास’ गरिदिएको भनेर युट्युब’रले सगर्व घो’षणा गरेका छन् ।
केही दिन’अघि कपनमा तीन महिना’को एक बच्चा फेला परेका थिए । एक बालगृहकी सञ्चालिका पुष्पा अधि’कारीले उक्त बच्चा’लाई ‘उपहारको नाटक’ गरिन् । त्यहाँ प्रह’रीभन्दा पहिले युट्युबर पुगे, वा बोलाइए । यसरी पुग्नेमध्येका एक थिए भाग्य न्यौपाने ।
पत्रकार सम्मेलन मा आफ्ना कुरा राख्दै
त्यस सँगै बाल’बालिका परिषदले बच्चा उद्दार गरेकी भन्दै लगेको छ । ११ बालिकालाई सरकारी संरक्षण केन्द्रमा राखिने बता’इएको छ । र पुष्पाले विरोधीलाई मुद्दा हाल्ने बता’एकी छिन् । आफू बच्चा लगेपछि रातभरि नसुतेको उनले बताइन् ।
Prevआज कुन ठाउँमा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्….
Nextबच्चाहरुले भने हामीलाई पुष्पा ममिनै प्यारो, हामी उँहासँगै बस्न चाहन्छौं (भिडियो सहित)
सुरक्षामा खट्दै गर्दा मृ`त्यु भएकी उर्मिलाको परिवारनै प्रहरी सेवामा, भर्खरै भएको थियो विवाह
श्रीमतीसँग भान्छा कोठामै चल्यो महानायक`को रोमान्स (हेर्नुहोस् भिडियो)